San Htun's Diary: January 2012
When I saw this picture on the Facebook, I really adored it. It's name is "I am programmer, I have no life". It reveals our employee's life. So I just want to share it.
စန်းထွန်းတယောက် ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေတော ဘယ်တွေရောက်လို့ဘာတွေပေါက်။ အရှုပ်တွေ လုပ်၊ ကွန်ပျူတာကလည်း Vista ကနေ Windows7ပြောင်းလိုက်တာ crash ဖြစ်ပြီး IT Department မှာ ၃ရက်လောက် အနားသွားယူပါတယ်။ စန်းထွန်းခမျာ ကျောင်းက ကွန်ပျူတာကြီးနဲ့နှစ်ပါးသွားနေရတာပေါ့။ ကျောင်းက ကွန်ပျူတာတွေက မြန်မာစာဖောင့်သွင်းခွင့် မရှိတော့ ဘလော့ကြီးနဲ့အဆက်အသွယ် ခဏပြတ်သွားတယ်။ ည ၉နာရီခွဲ Lab Monitor တံခါးလာပိတ်တဲ့အချိန် အဆောင်ပြန်။ အဆောင်ရောက်ရင် ဘာမှလုပ်စရာ မရှိလို့စာဖတ်ရင်း အိပ်ပျော်သွား။ ကွန်ပျူတာ မရှိတာ သူငယ်ချင်း၊ အပေါင်းအသင်း မဲ့သွားသလိုပဲ :) ။
ကွန်ပျူတာ ရရချင်း ဘာလုပ်တယ် ထင်သလဲ။ နောက်ဆုံးတောင်လေးကို ပြေးတက်လိုက်ဦးမှ။ ဖေ့ဘွတ်မှာ တွေ့ တဲ့တောင်ကို မတွေ့ ရလို့ ၊ ISS တောင်ကုန်းသာသာ တောင်လေးကို တက်ရလို့မကျေမချမ်း ဖြစ်နေကြတဲ့ စန်းထွန်းနဲ့အိအိ အဲဒီတောင်ကို တွေ့ အောင်ရှာမယ်လို့ကြုံးဝါးကြပါတယ်။ ET တို့တက်ခဲ့ကြတာ Bukit Timah တောင်။ စန်းထွန်းတို့သွားခဲ့တာက Bukit Batok တောင်။ ဟဲ..ဟဲ Bukit ခြင်းတော့ တူတယ် :P ။
နောက်၂ပတ်အကြာမှာ Bukit Timah ဆီ မကြေပွဲ နွှဲကြပြန်တယ်။ ဆုံရပ်က Bukit Batok MRT ၊ အချိန်က ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် စနေနေ့မနက် ၁၀နာရီလောက်။ ကားစီး၊ တောင်တွေ မြင်ရပြီး တာဝါတိုင်မြင်တာနဲ့ဆင်း၊ လမ်းလျှောက်။ တောင်ခြေရောက်ရင်ပဲ တော်တော်ဟိုက်နေပြီ။ ဒီတခါတော့ ကိုယ့်လို ဖလမ်းဖလမ်းထသူတွေ အများသား။ ကျောင်းသားတွေ၊ အငြိမ်းစားကြီးတွေ အုပ်စုလိုက်။
မျောက်တွေ ဆွဲမှာစိုးလို့မုန့် ထုပ်တွေ အိတ်ထဲထည့်ဖို့တာဝန်ရှိသူက လာပြောပါတယ်။ မျက်စိနောက်ရင် လိုက်ဆွဲတတ်တဲ့ ပုပ္ပားက မျောက်တွေလိုပါပဲလား။ တက်ရမဲ့ လမ်းကြောင်းကို အနီ၊အပြာ၊အဝါ၊အစိမ်း ကြာချိန်၊ လွယ်တဲ့လမ်း၊ ခက်တဲ့လမ်း အသေအချာ ညွှန်ပေးထားပါတယ်။ အခက်ဆုံး၊ အဝေးဆုံးလမ်းကို ရွေးလိုက်ကြတယ်။ ဘာအရောင်လဲတော့ မမှတ်မိ။
ဒီတခါတော့ ISS ကုန်းသာသာ မဟုတ်ဘူးဗျား။ မတ်မတ်ကြီး ဟိုက်နေအောင် တက်ရတယ်။ သစ်ပင်တွေက နေပြောက်မထိုးအောင်ပါပဲ။ လမ်းမှားမှာလဲ မပူရပါဘူး။ လမ်းတလျှောက် အနီရောင်၊ အပြာရောင်လိုင်းဆိုရင် ဒီဘက်၊ အဝါရောင် ဒီကနေ လမ်းခွဲ။
credit to ET
တောင်ထိပ် ရောက်ပါပြီ ခင်ည။
ငှက်ကြည့်နေသူတွေကို တွေ့ တယ်။ ဒီဓာတ်ပုံကို မမအိုင်အိုရာ မြင်ရင် ဒန့် ဒန့် ဒန့်ဖြစ်သွားမယ်။ ငှက်ကြည့်ချင်စိတ် ပေါက်သွားမယ်ကို ပြောတာပါ ဟိ..ဟိ။
ငှက်ကြည့်ကြသူများ credit to Ei Ei
ပြန်ဆင်းတော့ တော်တောင်ကြီး ဆင်းယူရတယ်။ မတ်လွန်း၊ ခက်လွန်းလို့ ။ လူလည်း နည်းတယ်။ ကိုယ်တွေက အဆင်းမို့တော်သေးတယ်။ တက်တဲ့သူများကတော့ ဟိုက်နေအောင် တက်ယူရမယ်။
၁နာရီလောက်ကြာလို့ရှာနေတဲ့ တောင်ကို မတွေ့ လို့ရေကန်ဆီ တွေ့ မလား ချီတက်ကြပြန်တယ်။ မြေပုံမှာသာ ဝေးတာ၊ လျှောက်တော့လည်း နီးသား။ မိုးကလည်း တဖြောက်ဖြောက်။
မတွေးပြန်ဘူး။ စိတ်ကြီးတဲ့ အိအိ တာဝန်ရှိသူတွေကို သူ့ ပန်းသီးကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံပြပြီး မေးတော့မှ Dairy Farm Route ဖက်မှာ ရှိတယ်။ တော်တော်ဝေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီတောင်ကို မတွေ့ မချင်း တွေ့ အောင် ရှာမယ်လို့ဇွဲနပန်း ခတ်သော်ငြားလည်း စတိတ်ကို သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ဒီဇင်ဘာမှာ ရန်ကုန်ပြန်တာရော၊ အိအိကလည်း မအားတာနဲ့အဲဒီတောင်ကို တွေ့ အောင် မရှာလိုက်ရပါဘူး။ အဲဒီတောင် ဘာများထူးခြားလို့ လဲလို့ထင်မိမယ်။ ဘာမှ မထုးခြားပါဘူး။ ရိုးရိုးသာမာန်တောင်လေးနဲ့မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းပြန့် ပြန့် လေးပါ။
တရားခံက ဒီတောင် credit to ET
အဲဒီလို အုပ်တောင့်တောင့်နဲ့တောင်တက်ချင်တာ..အားကျပါဘိ..
ခုတော့ အိအိနဲ့နှစ်ဗွေတည်း ဒိုးရရှာသည်..
တဗွေတည်း ဒိုးတဲ့ ကိုညိမ်းထက်တော့ သာသေးတာပ..:P....
ခွင့်မတောင်းဘဲ တင်လိုက်ပါတယ်..မကျေနပ်ရင် စီဘောက်မှာ လာအော်..ဒါဗြဲ
အဓိကတော့ ET၊ မယဉ်စု၊ အဲအဲတို့ လို တောင်ကို နောက်ခံထားပြီး မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာပါ။ နို့ မို့ခြင်္သေ့ကျွှန်းမှာ စန်းထွန်း မတက်ဘူးတဲ့တောင် မရှိဘူးလို့ကြုံးဝါးလို့ ရတယ်။ ခုတော့ ကြုံးဝါးခွင့် မကြုံလိုက်ဘူး။
ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂။
ဒီတခေါက်2weeks seminar course က ကျောင်းသားများလို့၃ဘာသာ သင်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာ Seifu က Project Management ၊ ပရောက်ဖက်ဆာ Steve Nolle က Enterprise Application ၊ ပရော်ဖက်ဆာ Michael (မိခဲ ဟု အသံထွက်သည်) က Spring & Hibernate ။ Spring & Hibernate က အရမ်းကောင်းပေမဲ့ မိုင်း၊ ဆူနမ်တို့ တွေ မနက် ၁၀ နာရီကနေ နေ့ လည် ၁နာရီခွဲတဲ့ အထိ နေ့ လည်စာလွတ်ကာ ကြိုးစားပမ်းစားဖြေပေမဲ့အဖြေမထွက်တဲ့ စာမေးပွဲပါ။ အဲဒီအကြောင်း Before & After ဆိုပြီး ပို့ စ်တောင်ရေးဖူးသေးတယ်။ မိုင်းက Spring & Hibernate ကို နိုး..နိုး။ Steve Nolle ရဲ့Enterprise Application ယူဆိုပေမဲ့ June Entry ကျောင်းသားအားလုံး Spring & Hibernate ယူရမယ်လို့ကျောင်းက ဗီတိုအာဏာသုံးကာ တချက်လွှတ် အမိန့် ချလိုက်တော့ Spring & Hibernate ယူရပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ seminar course တုန်းက Project Management နဲ့System Design course ၂ခုရှိပေမဲ့ System Design ကို ဖြုတ်ပြီး Project Management ပဲသင်တဲ့အခါ သင်တဲ့ဆရာကလည်း မကောင်းတော့ ကျောင်းသားတွေ Useless လို့ကွန်ပလိမ်းကြသေးတယ်။ စန်းထွန်းတို့ အလှည့် seminar course ကတော့ ကောင်းတယ်။ Spring & Hibernate seminar course က တကယ့်ကို ဘီးစီးပါတယ်။ သင်ရတဲ့ ၂ပတ်က ၂လလောက်နဲ့ညီတယ်။
ပရော်ဖက်ဆာ Michael က မိုင်း၊ ဆူနမ်တို့ လို စာမေးပွဲကို never never do it again လို့ဆိုလာပါတယ်။ သင်တဲ့စတိုင် ပြောင်းလိုက်တယ်။ ပထမတပတ် Spring ကို ရေးဖြေရော၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြေရတယ်။ ဒုတိယ အပတ်ကို Hibernate သင်ပြီး ရေးဖြေ ဖြေရတယ်။ ပြီးရင် Spring နဲ့Hibernate ပေါင်းတယ်။ တယောက်မှ စာမေးပွဲ မကျဘူး။ ဒီနည်းက ထိရောက်တယ်။
ပရော်ဖက်ဆာ Michael က နယ်သာလန်ကို ခွင့်ယူကာ ပြန်တာကြောင့် ပရောဂျက်ကို ပရော်ဖက်ဆာ Najeeb နဲ့ဆက်လုပ်ရပါတယ်။ ပရောက်ဖက်ဆာ Michael က Console နဲ့သင်သွားပေမဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ Najeeb က web application လိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျောင်းသားတွေခမျာ ယက်ကန်ယက်ကန် ရေကူးကြရသေးတယ်။ စန်းထွန်းတောင် အိပ်မပျော်၊ စားမဝင် Stress လိုက်သေးတယ်။
Individual ပြီးလို့အုပ်စုထဲက ပြီးတဲ့၊ ကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့project ကို enhance လုပ်တော့ စန်းထွန်းတို့အုပ်စုက Security ၊ Benjamin တို့အုပ်စုက Cloud ၊ Daniel တို့ အုပ်စုက Mobile ၊ Adbul တို့ အုပ်စုက Log ၊ Xiao Bai တို့ အုပ်စုက Social Network ၊ Yanzi တို့အုပ်စုက Ajax လုပ်ရပါတယ်။ ပရော်ဂျက်ပြီးလို့presentation လုပ်ချိန်မှာ ရှင်းပြတော့ သိသွားတာပေါ့။ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်တဲ့ course လေးပါ။
ကားမောင်းလိုင်စင်ကို လိုက်ပေးမဲ့သူ မရှိဘဲ တယောက်တည်း သွားဖြေတာ ၂ပတ် ဘမ်းလိုက်တယ်။ parallel parking မကျွှမ်းတာလဲ ပါတယ်။ ဒီတော့ Spring & Hibernate course ကို ပိုအာရုံစိုက်ဖြစ်တာပေါ့။
အခု Career Strategies course တက်နေရပါတယ်။ အင်တာဗျူးတာတွေ ဘယ်လိုဖြေရမလဲ အလုပ်မဝင်ခင် သိသင့်တာတွေ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ course ပါ။ မပင်ပန်းပေမဲ့ အလုပ်မရမှာ စိတ်ပူပြီး စိတ်ဖိစီးတယ်။
မနေ့ ကပဲ စီဗွီကို job search ဆိုဒ်မှာ တင်တာ ဒီနေ့ဖုန်းတွေ၊ အီးမေးလ်တွေ လာပြီ။ စလုံးနဲ့ ကွာပါ။ စလုံးမှာဆို တလလောက်မှ ခေါ်တာကလား။ စတိတ်က recruiter တွေ သောက်ကျိုးနည်း တယ်အလုပ်လုပ်သကိုး။ သူတို့ အလုပ်အရမ်းလုပ်တာ ကောင်းပေမဲ့ ကိုယ်တွေမှာတော့ စားနေတုန်း ဖုန်းလာပြန်ပြီ။ စားကောင်းခြင်း မစားရ၊ အိပ်ရာကတောင် မနှိုးသေးဘူး ဖုန်းလာပြန်ပြီ အိပ်ကောင်းခြင်း မအိပ်ရ။ မျက်လုံးမဖွင့်ဘဲ အင်တာဗျူးဖြေလိုက်သေးတယ်။ ဟိုဖက်ကတော့ အနံ့ တွေများ ရမလား မသိ။ မကိုင်ရင်လည်း အခွင့်အရေးတွေ လွှတ်သွားမို့ လို့ နဲ့ ။ ဖုန်းပြောရမှာတောင် ကြောက်တယ်။ ဒါကြောင့် စီနီယာတွေက ပြောပါတယ် After you submit your resume at job search site, your life will be miserable တဲ့။
အလုပ်လျှောက်တာကလည်း ပင်ပန်းတကိုး။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်တယ်ထင်ရင် စီဗွီတွေ ပစ်တင်၊ အင်တာဗျူးဖို့ အတွက် စာတွေဖတ်၊ ကိုယ့် knowledge ကို update လုပ်နဲ့ ။ အလုပ်မရသေးတဲ့ စီနီယာတွေကို ကြည့်ကာ စိတ်ပူ၊ အလုပ်ရသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အားကျ။ တော်ပြီး အလုပ်မရသေးတဲ့သူတွေ၊ မတော်ပေမဲ့ အလုပ်ကောင်းရသွားတဲ့သူတွေ တွေ့ ရတော့ ဆူနမ်ပြောသလို depends on luck ။
စီးပွားပျက်ကပ်ဖြစ်လို့DBS ဘဏ်ကနေ IT Professionals ၉၀၀ကျော် ဖြုတ်တဲ့နှစ်မှာ စလုံးရောက်ပေမဲ့ ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန် စီးပွားရေးပြန်ကောင်းလာတော့ ကျောင်းပြီးလို့တလကျော်အတွင်း ကျောင်းသားအားလုံးနီးပါး အလုပ်ရပါတယ်။ NUS ကလည်း ကမ္ဘာ့မှာ ၂၄ ကိုး။ အလုပ်ရှာတုန်းကများဆို စန်းထွန်းတယောက် စားလိုက်၊ သောက်လိုက်၊ ကိုရီးယားကြည့်လိုက်၊ အလုပ်လျှောက်လိုက်၊ အင်တာဗျူးသွားလိုက်နဲ့သိပ်စိတ်ဖိစီးရှာတယ်ထင်ပါ့ ဝဖီးလာတယ်။ ကပ်စားစရာ မကြီးတယောက်လုံး အနားမှာ ရှိနေတာကိုး။
အမျိုးတွေရှိတဲ့သူက အမျိုးတွေမှာ သွားနေပြီး အလုပ်ရှာ၊ ခင်ပွန်း၊ ချစ်သူရှိတဲ့သူတွေကလည်း သူတို့ ချစ်ချစ်ဆီသွားပေါ့။ အမျိုးလည်းမရှိ၊ ချစ်ချစ်လည်း မရှိတဲ့ စန်းထွန်းခမျာ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် သွားရမယ် မသိလို့ယောင်ချာချာ။ တချို့ တွေကတော့ New York မှ New York ။ Ohio က Offer ကမ်းရင်တောင် မယူတဲ့ New York crazy။ တချို့ ကတော့ California မှ California ။ စန်းထွန်းကတော့ cali မှ မ cali ၊ New York crazy လည်း မဟုတ်။ ကပ်စားရအောင် မကြီးကလည်း မရှိတော့ တော်တော် စိတ်ပိန်တယ်။ လူပါ ပိန်သွားရင် ကောင်းမယ်။
ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်းတို့ ကလည်း ကားမောင်းလိုင်စင် အရေးကြီးတယ်။ လိုင်စင်ရအောင် လုပ်ဆိုတော့ တပူပေါ် နှစ်ပူဆင့်။ စနေနေ့အတန်းပြီးချိန်ဆို ဘလော့တွေဖတ်လိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်နဲ့အေးအေးဆေးဆေး နှပ်ပေမဲ့ ခုတော့ စာပင်ပန်းတာလည်း မရှိဘဲ မအေးဆေးဘူးဗျား။ ပူနေတယ်။ ရုပ်ရှင်လည်း ကောင်းကောင်းမကြည့်နိုင်၊ ဘလော့ဂင်းတာလည်း စိတ်မဖြောင့်။
စလုံးမှာတုန်းကတော့ တော်တော်ပျော်တာဗျို့ ။ မကြီးက အရာရာစီစဉ်ပေး၊ ဘိုင်ပြတ်ရင် မကြီးဆီက တောင်းသုံး။ ကျောင်းမှာလည်း မြန်မာတွေက အများကြီး၊ အစားအသာက်ကလည်း အဆင်ပြေ၊ အလုပ်ကလည်း အဆင်ပြေဆိုတော့ ဘာအခက်အခဲမှကို မရှိခဲ့တာ။ စင်္ကာပူဆိုတာ မေ့ပြီး ရန်ကုန်လို့ တောင် ထင်နေတာ။
သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်းတာလား မသိ။ ဒီကျောင်းရလို့စတိတ်ကို ထွက်လာကတည်းက မပျော်တော့တာ ဘာလိုလိုနဲ့ ၁နှစ်တောင် ရှိပြီ။ မြန်မာဆိုလို့တယောက်တည်း အမကျန် အဲလေ အထီးကျန်။ အစားအသောက်ကလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးဆုံးအစားအစာကို ပြပါဆိုရင် ဒီကျောင်းက အစားအသောက်ကို ပြရမယ်။ ဘယ်သူမှ မစားနိုင်တဲ့ စန်းထွန်းလက်စွမ်းပြထားတဲ့ ဟင်းတောင် သူ့ ထက် သာတယ်။ တကယ်ပြောတာ အဟုတ်။ သံပုရာသီးညှစ်၊ ဆားဖြူး modify လုပ်ပြီးမှ စားလို့ ဝင်တယ်။ ဘယ်တော့မှ၊ ဘယ်လိုမှ မပိန်တဲ့ စန်းထွန်း ၄ပေါင်ကျတာကြည့်တော့။ အရင်တုန်းကတော့ ဆူနမ်တို့ချက်ပြုတ်ရင် လိုက်ချက်ပေမဲ့ အခုတော့ တယောက်တည်းဖြစ်လို့ပျင်းတာရော၊ မီးဖိုချောင်ကလည်း ပိတ်ထားတာ များလို့ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ ပဲ နှစ်ပါးသွားဖြစ်တယ်။
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်နဲ့ယှဉ်ရင် ဒီကျောင်းက ကောင်းပါတယ်။ NUS နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဒီကျောင်းကို မကြိုက်ရေးချ လုံးဝမကြိုက်။ စလုံးမှာ နေလို့ကွန်ပလိမ်းတတ်သွားတဲ့ စန်းထွန်း ကွန်ပလိမ်းရင် မကြိုက်တဲ့ မျက်နှာပေးတွေ မြင်ရတော့ စလုံးမှာပဲ ကွန်ပလိမ်းလို့ ရမှန်း သိသွားတယ်။ အဓိပ္ပာယ် အကျိုးမရှိ၊ အရေးမပါတာတွေ သင်ရတယ်လို့တွေးမိတဲ့အခါ၊ ကိုယ်ရွေးချယ်တာကို ဗီတိုအာဏာသုံးတဲ့အခါ အစာမကြေတာတွေ ကျိတ်မှိတ်မျိုချတတ်၊ မကြိုက်သော်လည်း ကြိုက်ချင်ယောင်ဆောင်။ စန်းထွန်းတယောက် မြိုချတတ်၊ ဟန်ဆောင်တတ်နေပြီ။
ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာကို ကြုံရတဲ့အခါ ကြံ့ကြံ့ခံတတ်အောင်၊ မတ်တပ်ရပ်နိုင်အောင် သင်ယူခဲ့တယ်။ တယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်အောင် သင်ယူခဲ့တယ်။ တခါတလေ တွေးမိတယ် ငါ့နှယ်နော် စလုံးမှာ နေမိတာ ကောင်းသား။ ဒုက္ခနဲ့လှလှ အဲလေ စန်းထွန်း တွေ့ ချင်လို့စတိတ်ကို လာမိတာပါလားလို့နောင်တရမိတယ်။
ပုသိမ်မှာ ကျောင်းတက်တုန်းက ထမင်းမဝဘူး မေကြီးရေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဖေကြီးနဲ့မေကြီးခမျာ ရွှေရင်ဆို့ ကာ အိပ်တောင် မပျော်ဖြစ်တယ်။ သမီးတွေ ပညာတတ်စေချင်လို့မြို့မှာ ပညာသင်ခိုင်းမိတာ မှားပြီးလားပေါ့။ တောမှာ တဝတပြဲတီးခဲ့သူတွေ စကေးနဲ့ စားတဲ့ မြို့ရောက်တော့ Culture gap ဖြစ်သွားတာကိုး။ အခုလည်း အစားအသောက်မကောင်းဘူး ဖေကြီးရေ၊ မပျော်ဘူး မေကြီးရေ ဆိုတော့ မိဘတွေခမျာလည်း စိတ်ပူကြရှာတယ်။ အလိမ္မာတုံးလေး မိစန်းထွန်းကလည်း အဆင်ပြေတယ်လို့မညာဘူးဗျား။
အခုလည်း ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်လွင့်မယ်ဆိုတာ မသိတဲ့ ရော်ရွှက်ဝါလိုပါပဲ။ ရှေ့ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ မသိဘူး။ မှုန်ဝါးဝါးနဲ့လမ်းပျောက်နေတယ်။ မသေချာဘူး၊ မရေရာဘူး၊ မပြီးဆုံးသေးဘူး။
ဒီမြို့ကလူတွေက ရင်းနှီးဖော်ရွေကူညီတတ်၊ ဆူနမ်၊ ရားမား၊ မိုင်းတို့ လို သူငယ်ချင်းတွေ ရလို့တော်သေးတယ်။ မနေ့ က ရာမားက အလုပ်ရတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဆိုပြီး ဆူနမ် Pizza Hut က ပီဇာရယ်၊ ကြက်ကြော်ရယ်ကို အွန်လိုင်းကနေ မှာပြီး ကျွှေးပါတယ်။ မိုင်းအလုပ်ရတုန်းကလည်း PizzaRanch မှာ တပျော်တပါး စားခဲ့ကြတယ်။ စတိတ်မှာ လက်ချိူးရေမှ စုစုပေါင်း ၃ယောက်သာရှိတဲ့ ၊ မိုင်ထောင်ချီအဝေးမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းက ခုလို သတိတရ၊ တကူးတက စားစေချင်လို့မုန့် လှမ်းပို့ ပေးတာ စန်းထွန်းတယောက် ဝမ်းသာလို့မျက်ရည်ကျတယ်။
ပန်ဒါ Yanzi လေးကို အတူစားဖို့သွားခေါ်ပေမဲ့ အပြင်ထွက်စားမို့ လို့ တဲ့။ ပီဇာလေးက အဖိုးမတန် ဈေးမကြီးပါဘူး။ ၁၁ကျပ်ပဲ ကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့မေတ္တာကတော့ တန်ဖိုးကြီးတယ်။ အပြင်မှာ နှင်းဖွေးဖွေး၊ အေးစက်စက် ကြက်သားတုံးကို တယောက်တည်း စားရတဲ့အခါ မိသားစုတွေ၊ မောင်နှမတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ စကားတပြောပြော လုစားခဲ့ကြတာ သတိရမိတယ်။ Discount Cupon လေးနဲ့ Toa Payoh Pizza Hut ကနေ ပီဇာသေးသေးလေးဝယ်၊ ပန်းခြံလေးမှာ ထိုင်စားကာ ညီအမနှစ်ယောက် ချွှေတာခြိုးခြံခဲ့ကြတဲ့အချိန်တွေကို သတိရမိတယ်။
ကိုနေဘုန်းလတ်က ထောင်ထဲမှာ နေရတုန်းက နံရံပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ လက်တဖက်လေးက သူတယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး၊ အဖေါ်တွေ ရှိတယ်လို့အားတက်စေခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ပီဇာသေးသေးကလည်း တယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး၊ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်လို့အားတက်စေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့နွေးထွေးမှုလေးကို ခံစားရလို့မျက်ရည်ကျကာ ပြုံးနေတဲ့ စန်းထွန်းကို မြင်ရရင် ရူးများသွားပြီလားလို့ထင်မိမယ်။
စန်းထွန်းတယောက် ဒုက္ခအထူကြီးနဲ့ရူးနေခဲ့ဖူးတယ်။ (မဒိုးကန် CopyRight နဲ့တရားမစွဲကြေး)
ဇန်နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၂။